ဂရီလဈ ကယူနိုကျတကျအတှကျ ပေါငျ သနျး ၁၀၀ တနျရဲ့လား…? – the One Sports Journal
ယူနိုကျတကျအသငျးက ကာလရှညျကွာ စောငျ့ကွညျ့နခေဲ့ပွီး မနှဈက နှရောသီအပွောငျးအရှရေ့ာသီမှာသတငျးတှထှေကျပျေါခဲ့ပမေယျ့ အကျစတှနျဗီလာအသငျးနဲ့သာ စာခြုပျသကျတမျးတိုးခဲ့တဲ့ ဂရီလဈဟာ ဒီနှဈမှာ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျးတှဟောပိုမိုကောငျးမှနျလာခဲ့သလို
အကျစတှနျဗီလာအသငျးရဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျ အဖွဈနဲ့ ကှငျးလယျတိုကျစဈမှာတာဝနျယူခဲ့ပွီး ပရီမီးယာလိဂျရဲ့ ထိပျတနျးကစားသမားတဈဦးအဖွဈပါ သတျမှတျခံထားရသူ တဈဦးဖွဈလာပါတယျ။
ဂရီလဈကိုချေါယူလိုနတေဲ့ ထိပျတနျးအသငျးတှဟော ဒီနှဈမှာ ပိုမိုမြားပွားလာခဲ့ပွီး လီဗာပူး၊ မနျစီးတီး၊ စပါး အစ ရှိတဲ့ အသငျးတှဟော ဒီကှငျးလယျကစားသမားကို ယူနိုကျတကျ အသငျးထကျ ပိုမိုကမျးလှမျးမှုတှလေုပျလာနပေါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဘကျက ဂရီလဈရဲ့အပွောငျးအရှမှေ့ာ သှေးအေးနပေမေယျ့ ကစားသမား ဘကျကတော့ သူ့နှလုံးသားထဲက အသငျးဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးလို့ ပွောဆိုထားသလို
ယူနိုကျတကျအသငျး ကို ပွောငျးရှကေ့စားဖို့ စိတျအားထကျသနျလကျြရှိကွောငျး သူ့ရဲ့ အေးဂငျြ့ဖွဈသူ ကို ထုတျဖျေါ ပွောဆိုထားကွောငျး လညျး သတငျးတှထှေကျပျေါခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၂၅ နှဈရှိပွီဲး ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဗီလာအသငျးအတှကျ၂၂ ပှဲကစားခဲ့ပွီး ၆ ဂိုးထိ သှငျးယူပေးထားတဲ့ ဂရီလဈဟာ ဖဖေျောဝါရီလကရရှိခဲ့တဲ့ ဒါဏျရာပွဿနာကွောငျ့ အနားယူနရေပွီး ပွနျလညျကစားခှငျ့မရသေးပါဘူး။
ဗီလာအသငျးနဲ့ ၂၀၂၅ ခုနှဈအထိ စာခြုပျခြုပျဆိုထားတဲ့ ဂရီလဈကို ဗီလာ အသငျးကလညျး ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ သနျး ၁၀၀ ခနျ့အလိုရှိနတေယျလို့ သူ့ကို စိတျဝငျစားနတေဲ့ အသငျးတှေ ဆီကို အကွောငျး ပွနျထားတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
အခုလို ဈေးကှကျထဲမှာ စိတျဝငျစားမှုမွငျ့တကျနတေဲ့ ဂရီလဈကို ပွိုငျဘကျ ပရီမီးယားလိဂျ အသငျးတဈသငျးဆီ မရောကျသှားဖို့ ဒီနှရောသီမှာ အရချေါယူသှာဖို့လိုတယျလို့လညျး သူ့ရဲ့ အေးဂငျြ့ဖွဈသူက ယူနိုကျတကျကို သတိပေးထားပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဘကျကတော့ မနှဈကထကျ ပွောငျးရှကွေ့ေး အလှနျ မွငျ့တကျသှားတဲ့ ဂရီလဈကို စိတျဝငျစားမှုလြော့ကနြသေလို အပွိုငျကမျးလှမျးမယျ့ အခွအေနလေညျးမတှရေ့ပါဘူး။
ပေါ့ဂျဘာ၊ ဖာနနျဒကျတို့လို့ ကစားသမားတှရှေိနတေဲ့ ယူနိုကျတကျကှငျးလယျအစုအဖှဲ့ကွောငျ့ ဂရီလဈရဲ့ ပေါငျးသနျး (၁၀၀) အပွောငျးအရှေ့ စညျးဝိုငျးမှာ ယူနိုကျတကျက အပွငျကဘဲ စောငျ့ကွညျ့နမေယျလို့ယူဆရပါတယျ။
ပရိတျသတျတှကေရော ဂရီလဈ က ယူနိုကျတကျအတှကျ ပေါငျ သနျး ၁၀၀ တနျရဲ့လားဆိုတာ ဆှေးနှေးကွပါဦး…
ဂရီလစ် ကယူနိုက်တက်အတွက် ပေါင် သန်း ၁၀၀ တန်ရဲ့လား…?
ယူနိုက်တက်အသင်းက ကာလရှည်ကြာ စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီး မနှစ်က နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ရာသီမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် အက်စတွန်ဗီလာအသင်းနဲ့သာ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့တဲ့ ဂရီလစ်ဟာ ဒီနှစ်မှာ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်းတွေဟာပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သလို အက်စတွန်ဗီလာအသင်းရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် အဖြစ်နဲ့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်မှာတာဝန်ယူခဲ့ပြီး ပရီမီးယာလိဂ်ရဲ့ ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်ပါ သတ်မှတ်ခံထားရသူ တစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။
ဂရီလစ်ကိုခေါ်ယူလိုနေတဲ့ ထိပ်တန်းအသင်းတွေဟာ ဒီနှစ်မှာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပြီး လီဗာပူး၊ မန်စီးတီး၊ စပါး အစ ရှိတဲ့ အသင်းတွေဟာ ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားကို ယူနိုက်တက် အသင်းထက် ပိုမိုကမ်းလှမ်းမှုတွေလုပ်လာနေပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်က ဂရီလစ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ သွေးအေးနေပေမယ့် ကစားသမား ဘက်ကတော့ သူ့နှလုံးသားထဲက အသင်းဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းလို့ ပြောဆိုထားသလို ယူနိုက်တက်အသင်း ကို ပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့ စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိကြောင်း သူ့ရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူ ကို ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုထားကြောင်းလည်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်ရှိပြီဲး ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဗီလာအသင်းအတွက်၂၂ ပွဲကစားခဲ့ပြီး ၆ ဂိုးထိ သွင်းယူပေးထားတဲ့ ဂရီလစ်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလကရရှိခဲ့တဲ့ ဒါဏ်ရာပြဿနာကြောင့် အနားယူနေရပြီး ပြန်လည်ကစားခွင့်မရသေးပါဘူး။ ဗီလာအသင်းနဲ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ဂရီလစ်ကို ဗီလာ အသင်းကလည်း ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် သန်း ၁၀၀ ခန့်အလိုရှိနေတယ်လို့ သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ အသင်းတွေ ဆီကို အကြောင်း ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
အခုလို ဈေးကွက်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ ဂရီလစ်ကို ပြိုင်ဘက် ပရီမီးယားလိဂ် အသင်းတစ်သင်းဆီ မရောက်သွားဖို့ ဒီနွေရာသီမှာ အရခေါ်ယူသွာဖို့လိုတယ်လို့လည်း သူ့ရဲ့ အေးဂျင့်ဖြစ်သူက ယူနိုက်တက်ကို သတိပေးထားပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းဘက်ကတော့ မနှစ်ကထက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး အလွန် မြင့်တက်သွားတဲ့ ဂရီလစ်ကို စိတ်ဝင်စားမှုလျော့ကျနေသလို အပြိုင်ကမ်းလှမ်းမယ့် အခြေအနေလည်းမတွေ့ရပါဘူး။
ပေါ့ဂ်ဘာ၊ ဖာနန်ဒက်တို့လို့ ကစားသမားတွေရှိနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်အစုအဖွဲ့ကြောင့် ဂရီလစ်ရဲ့ ပေါင်းသန်း (၁၀၀) အပြောင်းအရွှေ့ စည်းဝိုင်းမှာ ယူနိုက်တက်က အပြင်ကဘဲ စောင့်ကြည့်နေမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
ပရိတ်သတ်တွေကရော ဂရီလစ် က ယူနိုက်တက်အတွက် ပေါင် သန်း ၁၀၀ တန်ရဲ့လားဆိုတာ ဆွေးနွေးကြပါဦး…